Haraagii Jaamac Cali jamac oo Hargo maran soo sida | allsanaag
Haraagii Jaamac Cali jamac oo Hargo maran soo sida
Faroole oo ku guulaystay in nin Caasimadda ka soo jeeda loo magcaabo wasiirka maaliyadda
Mar haddii willkaygu waayey wasiirka Maaliyadda waa in laga dhigaa nin ka soo jeeda beesha Ciise Ciise Maxamuud.
Dib u dhaca Magcaabista golaha wasiirada Puntland, oo ay sabab u ahayd madaxweyniii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo doonayey in wiilkiisa curad ee uu ku soo koriyey xoolihii laga dhacay Ba nagigii dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland in looga dhigo wasiirka cusub ee maaliyadda Puntland.
laakiinse uu madaxweynaha Cusub ee Puntland Siciid Deni uu ka cago jiidayey muddo bil ah, ayaa hadda isaga oo Faroole kaashanaya Islaankiisa waxa laysku afgartay in wasiirka MAALIYADDA laga dhigo nin “caasimadda ka soo jeeda”, oo ay macnaeedu tahay nin ka soo jeeda Beesha Ciise Maxamuud.
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa la filayaa, haddii uu culayskii Reer Faroole uu ka degay in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirada, iyadoo ay bil ay ka soo wareegatay markii xilka Madaxweynaha loo doortay.
Beesha Majeeteen ayaa Puntland madaxweyne ka ah, Dhulbaantane waa ku xigeen, halka Warsangeli ay iyaguna ka hayaan gudoomiyaha Baarlamaanka. Beesha Dishiishe waxay horay u hayn jireen wasiirka Maaliyadda oo markii ugu horaysay uu ka inqilaabay Faroole oo isagu kursigaa ku fariistay.
Ugu danbayntii Deni ,Faroole iyo Ina Shiddo xishood la’aan ayeey golahooda ku soo dhiseen waana ogyihiin in nimankii iimaanka la’aa ee ka soo jeeday Sool iyo Sanaag ee fadhiyey baarlamaanka Puntland inay ansixin doonaan wasiiradda ay hor keenaana
Wasiirka maaliyadda iiga dhig
Yaa loo magcaabi doonaa wasiirka Maaliyadda Puntland?
← Wada hadaladdii Xaaraanta ahaa ayaa Hargaysa lagu qabtay Deked la Xaraashay →